FB သတင်းများ just4fun! - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Shweyay Htin Htin’s Gangnam Buffet shooting
Next: Beware! of Tourbox Travel Agency scam »
Myanmar Blog » Asia Entertainment » FB သတင်းများ just4fun!
While we are not politicians and we try not to discuss politics
Some of our favourite Myanmar Blogs and why we like them. Part
တိုင်းပြည်တွေမွဲသွားတယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့်စစ်ကြီးဖြစ်လို့ မွဲသွားကြတယ် စစ်ပြီးရင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ လုပ်ကြရတယ် စစ်တိုက်နေတုံးလူတန်းစား အသီးသီးက လက်နက်ကိုင်ကြရတယ် အနစ်နာခံမှုတွေသည်းခံမှုတွေ ယိုင်းပင်းမှုတွေစတဲ့ လူသားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ဓါတ်တွေ ပေါ်လာသလို ရိုင်းစိုင်းမှုသူရဲဘောကြောင်မှု၊ နှိပ်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု စတဲ့ အရာအားလုံးလဲ
Recruiting HR and Admin Managers. Please submit your application to “HR.Roche.Myanmar@gmail.com” credit to
ပြဿနာ စ ဖြစ်တာက ဒီလိုဗျ။
ပိုင်တံခွန် ကို ဘောင်မဝင်ဘူး ပြောလို့ ပိုင်တံခွန်က ဘောင်ဝင်ကြောင်း ထ ဆဲတာ။ ခိုင်သင်းကြည်က ဖာသည်မလား ဆိုပြီး ဆဲပြလိုက်တော့ အကယ်ဒမီရသွားတယ်လေ။ဒါကို မိုးယံဇွန်က အားကျပြီး သူလဲ ဆဲတက်ကြောင်း သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ဆဲထားတဲ့ Voice file ထွက်လာရော ။
ခင်လှိုင်က ဒီလိုဆဲမှ အကယ်ဒမီရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ဒါပေမယ့် မဆဲဘူး။ကျွန်တော်က သူများကိုပဲ ပုတ်ခတ်တာ ဆိုပြီး ဝုန်းပါလေရော။ရုပ်ရှင်ဥက္ကဌကြီး လူမင်းက ကြားဝင်ရတာပေါ့။ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့ ဆို ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရှင်မရိုက်ဖူးတွေဖြစ်ကုန်ပါလေရောလား။
ရုပ်ရှင်လောက ရှုပ်ထွေးနေတာကို အခွင့်အရေး အပိုင်ယူတာက ကဗျာဘွဲ့မှူး။ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပိုက်ဆံတွေချေးပြီး ပြန်မဆပ်တော့ဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကော်နီက ငိုပါလေရောလား။ကော်နီ ငိုတာက ချမ်းချမ်း flow နဲ့တူတော့ မေဆွိက ဘာမပြော ညာမပြောပဲ မင်းကံကောင်းပါဇီ ဆိုပြီး ထ အော်တော့တာပဲ။မေဆွိ အော်သံကို ကျော်ထက်အောင်လဲ ကြားရော သတင်းထောက်တွေ စီက Recoder တွေအကုန်ယူလိုက်ပြီး အဟမ်း ( ငါးမိနစ်ခန့်ကြာမှ )ခဏနေ ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့ပါမယ် ဆိုပြီး ကော့ပက်ကော့ပက်နဲ့ ထွက်သွားလေသည်။
ဂီတလောကနဲ့ အနုပညာလောက ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ လက်မလာထောင်တာက လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ။သူတို့မှာ အမွှာပူးလေး ရနေပြီဆိုပြီး သတင်းတွေ ပုံတွေ တင်တော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုက သူတို့ဘက်ရောက်သွားကြရော။ဒါကို ကင်မ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးက အမွှာပူးဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်ကြောင်း Movie တင်လိုက်မှပဲ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ တို့ ငြိမ်သွားတော့တယ်။
၁၉၈၂ မှာမွေးပြီး မိတ်ကပ်မကြိုက်တဲ့ အဓိပတိဘွားကြီး ဝေလ သီချင်းတွေက ၂၄ နာရီမပြည့်ခင် Download Link တွေ Online ပေါ် တင်တော့ ဝေလ အတော်လေး စိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒါကို သူ့ဆရာ ကို ဖင်ပြေးမတဲ့ တစ်ယောက်က မချစ်ရဘူးလား ဆိုတဲ့ သီချင်းကို movie ရိုက်ပြီး သူ့ဆရာသီချင်းကောင်းကြောင်းတင်လိုက်တော့ ဝေလ ပရိတ်သတ်တွေ ဝုန်းတာနဲ့ ရုက်ရမ်းရမ်းပြီး Movie ကို Delete လုပ်လိုက်ရတယ်။ကံဆိုတာ ဆိုးပြီးဆို ဆက်တိုက်လာတက်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။ခွေက ရောင်းမကောင်းတဲ့ ကြားထဲ သီချင်းကိုပါ လာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။ဝေလ ပရိတ်သတ်တွေက ကလေးတွေမှ မဟုတ်တာ။ကလေးတွေကတော့ ကလေးသီချင်းကြိုက်မှာပေါ့။
ပြည်တွင်းမှာ အခုလို အုတ်အော်သောင်းနင်ဖြစ်နေတော့ ကွီးဖြိုးက စင်္ကာပူ ရောက်တုန်း မဘသ မလိုဘူးဆိုပြီး ပြောပစ်တာ။မဘသ ကို ကွီးဖြိုးက အခုလို ပြောရမလားဆိုပြီး အမျိုးသာသာ သာသနာချစ်မြတ်နိုးသူ လူးလေးငါးဆယ်ယောက်က စက္ကူပေါ်စာရေးပြီး မြန်မာ Ipမင်းသားလေးကွီးဖြိုးကို ဆန္ဒပြကြတာ။အ့ အချိန် မဘသ က မဟက( မိုဟေကို )ကို အသုံးချပြီး စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ငါးသောင်းနဲ့ ရောင်းခိုင်းပါလေရောလား။ဒါကို မိုးယုစံက သနားတယ်ဆိုပြီး လည်ဟိုက်ကြီးဝတ်ပြီး မွေးနေ့ပွဲမှာ ကုန်း ကုန်းပြီး ဧည့်ခံလိုက်တယ်လေ။( သဘောက စိန်ဘယက် ကို မြင်စေချင်တာပါ။မိန်းကလေးတွေက စိန်ဘယက် မြင်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေက အင်းးးး တစ်ခုခု မြင်သွားမှာပါ)
မိုးယုစံ ခင်ပွန်းလောင်းက ဥာဏ်ကြီးရှင်ဗျ။Surprise လုပ်တယ်ဆိုပြီး မွေးနေ့မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာ။မင်းသမီးခင်ညာ အံ့သြလွန်းလို့ ဘာပြောရမယ်မှန်းသာ မသိသာ။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ Date တွေကျ အတိအကျ သိတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးတော့ ပဲမြစ် လက်ချက်ကြောင့် ခြောက်ချုပ် ချုပ်ခံလိုက်ရတာပဲ အဖက်တင်တယ် ။ ။ ။
ဤတင် FB သတင်းများကို ကြောငြာလို့ ပြီးပါပြီခင်ဗျာ ။ ။ ။
Credit to #Oo_Nyo
၂၀၁၃-ခုနှစ်၁၂ ရာသီ ဟောကိန်းများ (စံဇာဏီဘို)
Lynn Lynn’s new Album 4th “Revolution”
Mr.Fokker (wanted) ကိုတိုင်ပြီ
Journaling in .txt with Notepad